Canadanepal.net: Exclusive: हेन्डसम ईण्डियन लाहुरेकी ४ वर्षिया छोरीलाई के भयो यस्तो? ममी सम्झेर सधै रुन्छिन...
Exclusive: हेन्डसम ईण्डियन लाहुरेकी ४ वर्षिया छोरीलाई के भयो यस्तो? ममी सम्झेर सधै रुन्छिन...
युना गुरुङ ४ बर्षकी भईन । युनाको बुवा इन्डियन आर्मी हुन् । झट्ट हेर्दा सिनेमाको हिरो जस्तै देखिने यिनै हुन् उनै युनाको बुवा राहुल गुरुङ । बितेको १ महिना देखि युनालाई खेलाउने र भुलाउने उनको दैनिकी जस्तै हो । किन भने युनाले आमाको काख न पाएको १ महिना भैसक्यो । राहुलको हजुरबुवा इन्डियन आर्मी थिए । हजुरबुवाले काकरभिट्टा पारि भारतको बागडोगरामा घर बनाए । बागडोगरामा नेपाली भाषीको ठुलो बस्ति छ राहुल पनि त्यहि हुर्के । हजुरबुवाको बाटो पछ्याउंदै राहुल पनि इन्डियन आर्मीमा भर्ति भए । इन्डियन आर्मी भएको ३ बर्ष पछि राहुल बागडोगरामा गए । त्यहि बेला स्मिता लामासंग भेट भयो । राहुलको पहिलो भेटमै उनको प्रेम बस्यो । भेटेको केहि दिनमै उनले स्मितासंग बिवाह भयो । बिवाह पछि उनले बुवाआमा भएको ठाउँ गोर्खाको पालुंगटारमा लिएर आए । उनले स्मितालाइ नेपालमै ल्याएर राखे । स्मिता र राहुलबाट एउटा छोरी युना जन्मिन । यति राम्री युनालाई लिएर स्मिता आबुखैरीनिमा लिएर बस्न थालिन । राहुलले स्मितालाई एकदमै खुसीका साथ राखेका थिए । तर अचानक खै के भयो अहिले राहुल अहिले एक्ला भएका छन् । नेपाल छुट्टीमा आएको बेलामा पनि उनले श्रीमती स्मितालाइ सबैभन्दा महँगो मोबाइल किनिदिए । श्रीमतीले भने अनुसार नै उनकै रोजाईमा महँगो मोबाइल किनेकी थिइन । श्रीमानले मैले अहिले पनि स्मिताले यस्तो किन गरिन भन्ने बिश्वास नै नलागेको बताएका छन् । मैले एकदमै माया गर्छु खै कसरि यस्तो गरिन मलाई बिश्वास नै नलगाएको बताएका छन् । मिडियासंगको कुराकानीमा उनले स्मिताले भने अनुसारको सबै पुर्याएर दिएको थिए, बुवाआमाले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । यहाँ काम पनि केहि थिएन काम भनेको छोरीलाइ हेर्ने मात्रै थियो । हिड्ने दिन पनि उनले राम्रो संग हाँसी खुसि कुरा गरेर बिदा भएको बताएका छन् । पल्टनमा हुँदा यता नेपालको कुरा केहि थाहा पाएन मलाई उनि प्रति केहि संका पनि थिएन । उनले श्रीमती अर्कै केटासंग गएको बताएका छन् । मोबाइलको कल डिटेल चेक गर्दा १९६ पटक फोन गरेको उनले भेटाए । श्रीमतीले उक्त केटालाई यति धेरै पटक कल गर्दा केटाले भने १८ पटक कल ब्याक गरेको बताएका छन् । नानि सानै छ नानीले बुझ्दैन, नानीले सधै आमा खोज्छिन हामीले सम्झाउन सकेको छैन । उनि यसरि किन गईन थाहा छैन भन्दै खोजिदिन आग्रह गरेका छन् ।